रोचक अनुहारको कालो दाग हटाउने हो ? जानौँ अचुक २४ घरेलु उपाय
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: क्रमिक रुपमा गर्मी बढ्दो छ । गर्मीयामको बेला अन्य समयभन्दा अनुहार र छालाको बढी स्याहार गर्नुपर्ने हुन्छ । के गर्मीसँगै तपाईको अनुहारमा कालो दाग आएर हैरानी दिएको छ ? विभिन्न अनुसन्धान , शोधको आधारमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको आधारमा लोकपथ डटकमले यहाँ केहि घरेलु उपायहरु प्रस्तुत गरेको छ, जुन तपाईको लागि उपयोगी हुनसक्छ ।
अनुहारका रौँ हटाउने एउटा उत्तम घरेलु विधि, जान्नुहाेस्:
सबैलाई सुन्दर बन्न मन पर्छ । सुन्दरताको मुल्यांकन पनि अनुहारबाट नै गरिन्छ । सबैभन्दा पहिले सवैको आँखा पर्ने ठाउँ पनि अनुहार नै हो । त्यसैले अनुहार सफा, सुन्दर र चम्किलो बनाउन जो कोही तल्लिन रहन्छन् ।
कसैको अनुहारमा अनाबश्यक रौं तथा झुसले सुन्दरतालाई कुरुप बनाइदिएको हुन्छ । यस्ता अनावश्यक रौं एकै दिनमा हटाएर चम्किलो र सफा अनुहार बनाउने घरेलु विधिको विषयमा यहाँ जानकारी दिइएको छ ।
सामग्री, काँचो दूध,तर, बेसार,बेसन, बिधि, आदिकाे उपयाेग गर्दा निकै राम्राे हुन्छ । यस्तै, एक चम्चा काँचो दूधमा थोरै बेसन, एक चिम्टी बेसार र उमालेको दूधको तर मिसाएर मिश्रण बनाउने । पहिले सफासँग मुख धुने अनि यसरी बनाइएको लेपलाई धोएको अनुहारमा पुरै लगाउने ।
अनुहार सुख्खा हुन्जेल राख्ने र पुरै सुकीसकेपछि विस्तारै हातले मसाज गर्दा अनुहारमा भएका कमजोर रौहरुले जरा देखिनै ठाउँ छोड्छ । अन्त्यमा मनतातो पानिले मुख धुने तपाईंले सफा चम्किलो अनुहार पाउनुहुनेछ ।